Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny tabilao an'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Azo antoka fa efa nampiasa ny clipboard amin'ny Mac-nao indray mandeha. Ary ianao nefa tsy tsapanao akory. Mampiasa azy io ianao isaky ny "mandika / mametaka". Ity lahatsoratra ity, ohatra, dia tehirizina vetivety eo amin'ny takelaka Mac mba hahafahana apetaka amina varavarankely hafa na amin'ny fitaovana iOS aza raha mampavitrika ny clipboard manerantany.
Na izany aza, tena azo atao izany aorian'ny fampiasana be sy mety hirodana, rehefa maka tahaka sy mametaka ny atiny, tsy mandeha ny baiko. Tonga ny fotoana hanombohana ny solosainanao ary hijerena raha miverina amin'ny ara-dalàna ny zava-drehetra. Fa raha tsy liana amin'ny famerenana ny Mac-nao ianao dia tokony ho fantatrao fa manana fomba maro ianao hamerina ny takelaka Mac. Lazainay anao hoe:
1 Atsangano indray ny Mac Clipboard amin'ny alàlan'ny Monitor Monitor
2 Atsaharo ny Mac Clipboard amin'ny Terminal
Atsangano indray ny Mac Clipboard amin'ny alàlan'ny Monitor Monitor
Ny safidy voalohany omenay anao dia ny fampiasana ny Monitor Monitor ho hitanao amin'ny Mac rehetra. Aiza no misy azy? Mora: Finder> Applications> Utilities. Ao anatin'ity fampirimana ity no hahitanao ny Monitor Monitor. Te hanana làlana hafainganam-pandeha kokoa ve ianao? Ampiasao Spotlight: antsoy amin'ny habaka Cmd + ary soraty ao anaty boaty fikarohana "Monitoring". Tsindrio ny safidy voalohany.
Vantany vao manomboka ny Monitor Monitor, ao amin'ny boaty fikarohana azy eo amin'ny ankavanana ambony, dia soraty ny teny hoe "pboard." Hiverina amin'ny vokatra tokana izany. Mariho ary tsindrio ny bokotra amin'ny «X» izay anananao amin'ny faritra havia ambony amin'ny rindrambaiko. Hanontany anao aho raha te hanana antoka fa hanidy an'io dingana io ianao. Tsy maintsy tsindrio ny «Force exit». Haverina haverina ny clipboard ary azo antoka fa ho voavaha ny olan'ny kopia / apetaka.
Atsaharo ny Mac Clipboard amin'ny Terminal
Fomba iray hafa ny fampiasana Terminal. Aiza no hitondrako io asa io? Handeha isika Finder> Applications> Utilities. Raha vantany vao natomboka ny "Terminal" - mazava ho azy, afaka mampiasa Spotlight ianao amin'ny fikarohana azy - tsy maintsy manoratra ireto manaraka ireto ianao:
Aorian'izany dia tsy maintsy mikapoka ny bokotra "Enter" ianao ary manidy ny terminal. Haverina indray ny dingana. Ary miaraka amin'izany dia voavaha ny olana. Raha tsy mahavaha ireo dingana roa ireo dia eny, tsara kokoa ny mamerina ny Mac hijerena raha voavaha ny olana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny tabilao amin'ny Mac
Hector Ulises dia hoy izy:
Misaotra fa niasa tsara ho ahy ny nanaovako azy avy teo amin'ny terminal izay miaraka amina MacBook miaraka amina processeur M1 manantena aho fa hisy hahita azy ho mahasoa ihany koa
Valiny ho an'i Hector Ulises